Mamorona ny kinova monochrome an'ny logo: tondro manan-danja 4 | Famoronana an-tserasera
Mamorona ny kinova monochrome an'ny logo: famantarana manan-danja 4
Androany isika dia manana varavarankely, fanohanana na fomba samihafa hanehoana na hampidirana ny endrika orinasa orinasa. Noho io antony io dia tsy maintsy manombatombana izay ho alehan'ny zavatra noforonintsika isika ary amin'ny toe-javatra manao ahoana no tokony hisolo tena azy ireo ao anatin'ny orinasa. Araka ny hitantsika tao amin'ireo andian-dahatsoratray hamolavola boky torolàlana momba ny orinasa amin'ny fomba marina sy ara-dalàna, ilaina foana ny mamorona paikady iray hanehoana ny endrin'ny orinasa. Amin'ny tranga kinova monochrome dia tsy maintsy asongadintsika fa natao hanolorana safidy hafa rehefa mahita fiaviana maro loko isika, miaraka amin'ny gradients na mangarahara toy ny vera na kristaly aza. Mazava ny tanjona: Mila mamorona kinova hafa izahay hiantohana ny fahombiazan'ny volavolan-kevitra.
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia nandinika torohevitra vitsivitsy izahay hamolavolana kinova monochrome amin'ny logo ary na dia efa nahita tranga maromaro aza izahay dia marina fa namela ny sasany tamin'ny fantsona izahay. Androany dia hanidy ny lisitry ny toro-hevitra izahay ary hijery ohatra vitsivitsy izay maneho tsara ireo teknika sy paikady novolavolaina.
Raha te hijery ny tapany voalohany amin'ity lisitr'ireo toro-hevitra ity ianao dia azonao atao ny miditra amin'ilay lahatsoratra amin'ny fipihana ity rohy.
Raha liana amin'ny lohahevitr'ireo boky torolàlana momba ny orinasa ianao dia mamporisika anao hijery aho andiany ity izay hamakiantsika ireo singa tsirairay izay tsy maintsy raketiny sy ny firafitra voafaritra kokoa na latsaka tokony harahina.
1 Ary ahoana ny amin'ireo logo izay misy faritra manjavozavo?
2 Logo miaraka amin'ny sary na estetika manara-penitra
3 Ahoana ny fomba hitsaboana sy hisolo tena ny endrik'ilay sary famantarana?
4 Dika monochrome marobe
Ary ahoana ny amin'ireo logo izay misy faritra manjavozavo?
Miaraka amin'ny gradients sy texture, ny effets diffusion dia mety hanjary fanamby amin'ny fanaovana kinova monochrome. Miankina amin'ny maha-zava-dehibe ny vokadratsy ary ny firafitry ny sary dia ho voavaha amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa. Ireto ambany ireto dia afaka jerentsika ny amin'ireto ohatra manaraka ireto, ireo marika ireo dia namaha ny fanamby tamin'ny fampiasana teknika tena mitovy amin'ny fampiasana efijery semitone.
Araka ny nolazaiko, ny zava-drehetra dia miankina amin'ny karazana volavolam-panamboaranay, indraindray mba tsy hivadihana bebe kokoa amin'ny voalohany, ilaina ny mampiasa teknika hafa. Amin'ity tranga ity, ny tsipika nopotehina dia ampiasaina hanamboarana kinova monochrome.
Logo miaraka amin'ny sary na estetika manara-penitra
Misy tranga hafa rehefa miatrika famolavolana hyper-realistika isika na misy singa sary aza, amin'ity tranga ity dia miditra amin'ny olana lehibe isika satria azontsika atao ny mampidi-doza ny votoatin'ny foto-kevitra voalohany. Imbetsaka, tapaka ny hevitra fa hofoanana tanteraka ilay singa fakana sary sy hitazomana ilay typografika saingy, araky ny efa nolazainay, miankina amin'ny refy iainan'ireo faritra tsirairay ireo. Ny mazava dia tsy maintsy manao zavatra isika ary mazava ho azy satria io karazana endrika io dia misy fiasa izay amin'ny famaritana dia tsy ho tafiditra ao anaty singa noforonina tamin'ny ranomainty tokana toy ny volavola, aloka, firafitra, gradien, fades ary karazana effet light. . Manana safidy roa hafa isika noho izany:
Esory ny singa sary: Ity safidy ity dia atolotra ho an'ireo endrika rehetra izay tsy anovanan'ny safidin'izy io ny votoatin'ny foto-kevitra ary na izany aza, manohy mamantatra mora foana ny logo izahay na dia amin'ny kinova monochrome ary na inona na inona voalaza.
Mamolavola kinova fisaka an'ilay singa sary: Ho an'ireo tranga rehetra ireo izay nanesorana ny singa tena izy dia tsy misy atiny na manome antsika valiny hafa tanteraka amin'ny foto-kevitra voalohany ary manasarotra ny fampahafantarana azy amin'ny besinimaro.
Azonao atao ny mahita eto ambany ohatra maromaro, toy ny mahazatra, ny sary dia tsara kokoa noho ny teny arivo:
Ahoana ny fomba hitsaboana sy hisolo tena ny endrik'ilay sary famantarana?
Ahoana raha tsy afa-po amin'ny fandefasana tsy miloko aho ary te hitazona ny firafitra amin'ny volavola fisaka nataoko? Etsy ambany no ahitantsika tranga vitsivitsy izay nahitana solontena tamin'ny ranomainty tokana ary tsy mitombina na iza na iza ny chromatic nuances, na eo aza ny tranga farany dia fisaka ireo loko roa aseho amin'ny kinova voalohany. Hisy famolavolana izay mankasitraka bebe kokoa na latsaka saingy tadidio fa ny kinova dia amin'ny fotoana tena manokana ihany no hampiasana azy, noho izany dia ho ampy hahafantarana azy mora foana sy azo ampifandraisina amin'ny marika tany am-boalohany. Mazava ho azy, ao anatin'ny fahafaha-manao azontsika atao dia tsy maintsy manandrana manome ny farany tsara indrindra isika.
Dika monochrome marobe
Imbetsaka ny mpamorona no mamorona kinova monochrome hafa mba hiantohana ny fampidirana tonga lafatra amin'ny salantsalany rehetra. Androany dia misy sehatra sy haino aman-jery isan-karazany ahafahana mampiditra ny logo antsika. Marika maro no mirona amin'ny famolavolana kinova roa, ny iray amin'izy ireo dia matanjaka kokoa ary ny iray somary miha contour. Andao alao sary an-tsaina fa mila manjaitra ny kinova monochromatic amin'ny akanjo lamba isika, amin'ity tranga ity dia mila kinova mafimafy kokoa isika, na izany aza, ny kinova iray amin'ny antsipiriany kokoa dia mety kokoa amin'ny fanohanana toy ny vera na zavatra haingon-trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Mamorona ny kinova monochrome an'ny logo: famantarana manan-danja 4
Juanstrong dia hoy izy:
Tsara ity lahatsoratra ity… misaotra!.
Valiny tamin'i Juanstrong
Modesto Garcia dia hoy izy:
Salama Fran. Tiako izany raha azonao atao ny mametraka ny loharanon'ny lahatsoratra tany am-boalohany, izay anay. Misaotra betsaka
Valiny tamin'i Modesto García
Fran Marin dia hoy izy:
Salama Modesto, misaotra amin'ny fanamarihana, adinoko! Mirary ny soa indrindra :)
Valiny tamin'i Fran Marín
10 Wallpaper Halloween ho an'ny PC sy Mac
Fetsy 3 hahitana raha namboamboarina ny sary